I-Raw Fulvestrant (129453-61-8) HPLC≥98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Umgcini-mali (129453-61-8)
Akukho kalo SKU: 129453-61-8. Udidi: abanye
Abasebenzi bezakhono ezisisiseko
Ukusetyenziswa kwe-Fulvestrant (129453-61-8) kumjikelezo we-steroids
I-Fulvestrant (i-CAS 129453-61-8), igama leBrama nguFaslodex.
I-Fulvestrant isiza njengesisombululo (i-liquid) ukuba ijojowe ngokukhawuleza phezu kwe-1 ukuya kwi-2 imizuzu ibe yimisipha kwiindawo. I-Fulvestrant (129453-61-8) ilawulwa ngugqirha okanye umongikazi kwiofisi yezobugcisa. Ngokuqhelekileyo unikezelwa kanye emva kweeveki ze-2 zokuqala kwee-3 (imihla 1, 15, ne-29) kwaye emva kwenyanga emva koko. Uya kufumana umthamo wakho weyeza njengamayeza ahlukeneyo (enye kwindawo nganye).
Ukusabela ezibi zilandelayo ukuxoxwa ingenkcukacha ezininzi kwezinye amacandelo zokuphawula: Ingozi Ukopha, Ukwanda nokuzibonakalisa Izigulane Hepatic Umonakalo, inaliti Reaction Site, umbungu-Fetal letyhefu.
IHormones yimizimba yeekhemikhali eziveliswa zizigulane emzimbeni, zichithwe ngegazi kwaye zibangele iziphumo kwezinye iifom. Ngokomzekelo, i-hormone testosterone eyenziwa ngamathambo kwaye ixanduva lweempawu zesilisa ezifana nokunyaniseka kwezwi kunye nokwanda kweenwele zomzimba. Ukusetyenziswa kwonyango lwe-hormone ukunyanga umdlavuza kusekelwe ekugqibeleni ukuba ama-receptors amaharmone athile afunekayo ekukhuleni kweseli aphezulu emanqenqeni amathumba. Hormone amayeza asebenza ngokunqanda ukuveliswa yincindi ethile, uvimba receptors hormone, okanye wokusebenzisa arhente iikhemikhali efanayo hormone esebenzayo, zibe esetyenziswa iseli ithumba. Iindidi ezahlukeneyo zonyango ze-hormone zihlelwe ngumsebenzi wazo kunye / okanye uhlobo lwe-hormone echaphazelekayo.
Amanqamu amaninzi ebelekile anama-receptors e-estrogen, kwaye ukukhula kwezi zicubu kungakhuthazwa yi-estrogen. Fulvestrant (129453-61-8) yi-downregulator estrogen receptor, oku kuthetha ukuba enebana kwisiza receptor estrogen kukhuphiswano kunye estrogen emzimbeni. Emva kokuba ibophelele kwisayithi ibangela ukuba i-receptors iphule, ngaloo ndlela ikhusele impendulo yeselula e-estrogen.
Indlela yokuthenga i-Fulvestrant esuka kwi-AASraw